Wararkii Ugu Dambeeyay kulamada Madaxweynaha Baladweyn kula leeyahay Waxgaradka Gobolka Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada Beledweyne ee Xarunta maamulka Gobolka Hiiraan ayaa waxaa wali ka socda kulamo kala duwan oo u dhexeeya Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Odayaasha Gobolka Hiiraan, ka gadaal markii maanta lagu kala kacay kulamadii socday.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo aan wali ka quusan xal u helida kala aragti duwanaanta ka dhextaagan Dowlada iyo Odayaasha Hiiraan, ayaa waxa uu caawa dib u bilaabay in mid mid uu ula kulmo Odayaasha si xal waara looga gaaro arinta taagan.
Madaxweyne Xasan oo dhinacyo badan ka eegaaya xaalada taagan ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujinayaa kulamada socda, isaga oo dhabarka u xirtay sida uu ku qancin lahaa Odayaasha.
Madaxweyne Xasan oo dhibaatooyin kala kulmaaya Odayaasha kala duwan ayaa waxa uu hadana culeyskiisa isugu geeyay kuwooda ugu miisaanka culus si uu magaalada Beledweyne kala soo laabto guulo wax tar u leh Dowlada.
Odayaasha oo qaarkood ku kala aragti duwan Shirka Hiiraan ayaa waxaa soo muuqaneysa in Ujeedka Madaxweynaha uu yahay in dhamaan Odayaasha hal meel ay kuwada taageeraan go’aanka Dowlada ay ka damacsan tahay shirka ka socda magaalada Jowhar ee muranka badan uu ka taagan yahay.
Waxaan la cadeynkarin sida uu noqon doono kulamada ka socda Magaalada Beledweyne walow Dowlada ay mar waliba dul taagan tahay rajo.